Zvirongwa zveMac: akanakisa mashandisiro nemitambo | Ini ndinobva kuMac (Peji 3)
Dhizaina logo yako, bhizinesi kadhi, flyer kana kukoka neLog Maker
Kutenda kune iyo Logo Mugadziri application, tinogona kugadzira chero mhando ye logo, bhizinesi kadhi, mapepa kana makadhi emari shoma kwazvo.
Fliqlo, screensaver wachi yeMac yako
Fliqlo ndeyevintage wachi iyo iwe yaunogona kuisa seye screensaver pane yako Mac
Nzira yeKutapwa mutambo, inowanikwa paMac kutanga Nyamavhuvhu 11
Musoro wePath Exile unosvika muApple komputa ecosystem munaGunyana 11, chero bedzi coronavirus isingazvidzivirire.
Iyo yekuyedza Safari browser, uko Apple inoedza mashandiro ayo anogona kana asingasvike iyo inowanikwa vhezheni yeSafari ...
Kufananidza Kuwana 6: Mano ekuwana kure kure kusvika mashanu maMac
Iyo nyowani vhezheni yeParlellels Kuwanikwa kweMac inobvumira imwe nyowani yekure kure rubatsiro rwemunhu neanosvika mashanu maMacs panguva imwe chete.
Iyo "Yakakodzera" basa maneja we macOS inogamuchira hombe kuvandudza
Iyo "Yakakodzera" basa maneja we macOS inogamuchira hombe kuvandudza. Nyowani nyowani uye nyowani mabasa kuti iwedzere kushanda.
Spotify yeMac ikozvino inogona kutumira mimhanzi yako zvakananga kuChromecast
Spotify yeMac ikozvino inogona kukanda mimhanzi yako kuChromecast. Iye zvino unogona kutumira mimhanzi yako zvakananga kubva kuMac yako kuenda kuChromecast usinga pfuure neiyo iPhone.
Teregiramu yakagadziridzwa ichikubvumidza iwe kuti uwedzere mapikicha mapikicha kana mavhidhiyo uye nezvimwe
Iyo itsva vhezheni yeTeregiramu inouya yakabatana kune vashandisi veIOS uye macOS. Mune iyi vhezheni 6.3 yakakosha shanduko inowedzerwa
Ziva zvese ruzivo rwepikicha ine Photo Infomation Viewer
Nekuda kweichi chishandiso, zvinokurumidza uye zviri nyore kuziva zvese zvakadzama zvemifananidzo muraibhurari yedu, data iro iro Mifananidzo yekushandisa rinotipa.
Viga maikoni edesktop ako nekukurumidza neDesktop Ghost Pro
Kutenda kuDesktop Ghost Pro application, tinogona kukurumidza kuviga zvidhori zvese pane desktop yedu nekukurumidza uye nyore
Bvisa mafuremu kubva kuGIF mafaera nekukurumidza uye nyore neichi chishandiso
Kubvisa mafuremu ayo ari chikamu cheGIF faira iri nyore kwazvo nekuda kweGif Separate application inowanikwa yeMacOS.
Deredza ruzha mumifananidzo yako ne Super Denoising
Kutenda kune iyo Super Denoising application, isu tinogona kudzikamisa ruzha rwemapikicha mune imwe nyaya yemasekondi nenzira yakapusa.
Kurumidza kuona kuti unoshandisa sei hard drive yako pagrafu
Kuziva mashandisiro atinoita nzvimbo pane yedu yakaoma dhisiki kunotibvumidza isu kuti tizive uye nekukurumidza kusunungura nzvimbo yatisingakoshe isu yatiri kutora.
Blur kumashure kwemifananidzo yako nePhoto Blur
Kumhanyisa kumashure kwemifananidzo yedu paMac inzira inokurumidza uye yakapusa nekuda kweiyo Photo Blur application.
Dhawunirodha mavhidhiyo kubva kuYouTube, Facebook, Vimeo uye chero imwe chikuva ne Downie
Kana iwe uri kutsvaga kunyorera kurodha YouTube mavhidhiyo, iwe unofanirwa kupa Downie kuyedza, inokurumidza uye nyore kushandisa application.
Wedzera kana kudzikisa Boot Camp partition nzvimbo neCamptune
Kugadziridza iyo nzvimbo iyo yedu Boot Camp partition inogara paMac yedu inokurumidza uye yakapusa neCampTune, pasina kudzoreredza Windows.
Dzivirira Mac yako kubva pakurara neUsarara
Kutenda kune Usarare Kurara application, yedu Mac haizomboenda kunorara kana iko kuvhura iko kuvhura kana kwenguva yakareba sekusimbisa kwatakaita
Seta iyo nguva yenyika dzaunoda mubar yemenyu ne Times
Nekushandisa kwe Times, zviri nyore kwazvo kukurumidza uye nyore kuziva iko kushandiswa kweawa dzedzimwe nyika kuitira kuti usafone mushure memaawa.
Yakazara Hondo: Warhammer II inosvika zviri pamutemo paMac App Store
Mutambo wengano Hondo Yese: WARHAMMER II anosvika zviri pamutemo kuchitoro cheMac, iyo Mac App Store
Hupenyu hunoshamisa 2 zvakare yakaderedzwa kusvika hafu yemutengo
50% dhisikaundi yemutambo we macOS, Hupenyu hunoshamisa 2. Uyu mutambo unenge uri kutengeswa kwenguva shoma kwemaawa mashoma
Safari Technology 110 ikozvino yawanikwa kurodha pasi
Iyo 110th vhezheni yeSafari Technology yave kuwanikwa yekurodha pasi kubva kumaseva eApple.
Pixelmator Pro inosvika vhezheni 1.7 nenhau dzinonakidza
Iyo yazvino yekuvandudza kuPixelmator Pro inotipa nzira nyowani dzekushanda nemagwaro nekuchinjisa iwo kumafomu akambosimbiswa.
Iyi SwiftUI chirongwa chinotiratidza izvo Hutano app ichaita senge pane yako Mac
Iyi SwiftUI projekiti inotiratidza izvo iyo Hutano app ichaita kunge pane yako Mac. Anapp iyo inofanirwa kuve kwete kwete chete paIOS, asiwo paPadOS uye macOS
Gara uchiziviswa kuburikidza neGoogle News paMac yako neiyi yemahara app kwenguva shoma
Nekuda kweichi chishandiso, isu tinokwanisa kuwana iyo nhau dzinonyanya kutifadza kubva kuGoogle News kubva kumusoro menyu bhawa reMac yedu.
Zuva reTende, Grim Fandango uye Yakazara Throttle yemahara kwenguva pfupi pane iyo Mac App Store
Kana iwe wakagara uchifarira graphic adventures, haufanire kupotsa ichi chakanakisa kupihwa kwemazita e4 atinogona kurodha mahara.
Kutamba mavhidhiyo eYouTube neVimeo muMapeji neNhamba zvino zvave kukwanisika neyekuvandudzwa kwazvino
Yazvino kuvandudzwa kweMapeji neNhamba zvinotibvumidza kutamba YouTube uye Vimeo vhidhiyo yakananga mugwaro.
Maitiro eku maneja kambani yedu nenzira yakapusa pasina zvichienderana nevechitatu mapato
Tora kutonga kwekambani pasina kuvimba nemazano mune yakapusa maitiro kana isu tiine chaicho maturusi.
Basa idzva rakawedzerwa neExcel yeMac, rinotibvumira kuti tigadzire matafura kubva kumifananidzo yakateedzerwa kubhodhibhodhi
Google Chrome ichatibvumidza kuwana maawa maviri ehupenyu hwebhatiri nekudzora mashandisiro ekushandisa
Edza madaro nenzvimbo kubva kuMac yako neMepu Dunhu & Nharaunda
NeMepu Dunhu & Nharaunda kunyorera tinogona kuyera madaro uye kuverenga nzvimbo nekukurumidza uye nyore.
75% kuderedzwa kweiyo yakasarudzika Bioshock Yakadzoserwa iyo inowanikwa muchitoro cheiye anovandudza Feral Inopindirana
Rongedza yako Mac kudzima, kutangazve kana kurara neakarara
Kutenda kune Kurara kunyorera, tinogona kuronga kudzimwa kwemidziyo yedu nekukurumidza uye nyore, chishandiso chinomanikidza kuvharwa kwemapurogiramu akavhurika
Stranger Zvinhu: 3 mutambo wakasununguka kwenguva yakati rebei paEpic Mitambo Chitoro
Muchinyorwa chakapfuura, ini ndakakuzivisa nezve zita remusoro watinogona kuwana nechidimbu chinonakidza mu ...
GRID Autosport inopihwa kwenguva yakatarwa (5,49 euros)
Kana iwe uchida mitambo yemitambo yemitambo, iwe ungangodaro unofarira kuziva kuti GRID Autosport inowanikwa pakutengesa kwenguva shoma
Xcode 12 inounza nyowani dhizaini uye nyowani zvinyorwa tabo
Xcode 12 inounza dhizaini nyowani uye nyowani zvinyorwa tabo. Chitarisiko chitsva chinoenderana neMacOS Big Sur uye matsva matsva.
Safari ichaenderana newebhu kuwedzeredzwa kubva kune mamwe mabhurawuza
Iine macOS Big Sur, Apple inoda kupa mukurumbira kune ekuwedzera mukati meSafari uye kuvabvumidza kuti vashandurike nyore
Opera ye macOS inowedzera kuwanikwa kwe Twitter kubva padivi repadivi
Iyo Opera browser ye macOS ichangobva kuvandudzwa kushanduro 69, kusanganisira kumwe kuvandudzwa uye kusangana kwayo neiyo social network Twitter
EzyCal, yemahara yakatemwa-yenguva yepamusoro menyu bar khalenda
EzyCal iri nyore kalendari application iri mune yepamusoro menyu bar uye inotibvumidza isu kuti tiwedzere zviitiko zvitsva uye tibvise kubva kune yemuno karenda.
Yakazara Hondo: Shogun 2 Kuunganidzwa uye Kudonha kweSamurai pa50%
Mazita maviri muTotal Hondo akateedzana anowanikwa kwenguva shoma pa50% yemutengo wavo wenguva dzose muchitoro cheFeral Interactive
Dzidza kutaipa pane yako Mac neKiyiKey
Kudzidza kutaipa kuvandudza chigadzirwa chedu inzira inokurumidza uye yakapusa nekuda kweKeyKey application
4Ktube, yakawedzera kuwedzera kweSafari iyo inobvumidza iwe kuona 4K mavhidhiyo
Shandisa iyi yekuwedzera inonzi 4Ktube kuti ugone kutamba zvirinani 4K zvemukati kuwana kubva kuSafari paMac yako
Twitch Studio ikozvino yawanikwa yeMac mune beta
Iyo Twitch Studio application kutenderera kubva kuMac yave kuwanikwa, kunyangwe panguva ino iri mubeta kune wese munhu.
Nguva dzose chengeta yako Mac yakagadziridzwa neCleanMyMac X
Iwo akanakisa mashandisirwo aripo iye zvino e macOS anotibvumidza isu kuvandudza mashandiro emakomputa edu ndeye CleanMyMac X
Tarisa uone sarudzo idzi kana uchida kuendesa data kubva kuAndroid kuenda kuMacOS
Havasi vese vashandisi veMac vane iPhone. Kana iwe uri mumwe wavo uye uchida kuendesa data kubva kuApple kuenda kuMac, tarisa kune matatu ekushandisa.
Wedzera retro mhedzisiro kumifananidzo yako neKamera Retro
Kamera Retro ndeyekushandisa kwemacOS iyo yatinogona nyore uye nekukurumidza kukweja mifananidzo yedu nekungobaya mashoma.
Maitiro ekuongorora, emahara kwenguva shoma
Kutenda kune iyo Process Monitor application, isu tinogona kukurumidza kutarisa kuti maapplication kana zviwanikwa zvishandiso zvemidziyo yedu zvinoshandisa mashandiro ayo.
Tsvina 4 inowanikwa ne40% dhisikaundi
Tora iyo Rally Dirt 4 mutambo we macOS ine 40% dhisikaundi pamutengo wayo wepamutemo. Chipo chaicho chevadi vemitambo iyi
iBooks Author ichanyangarika kubva kuMac App Store muna Chikunguru 1
Apple inoita kuti iwanikwe kune chero Mac mushandisi, iyo yemahara iBooks Munyori kunyorera, kunyorera kwatinogona…
Mactracker inogadziriswazve kuwedzera zvigadzirwa zvitsva
Mune vhezheni itsva yeMactracker nhau dzichangoburwa maererano neApple michina uye shanduro software zvinowedzerwa
Usapotsa chero mazano nekutenda kuCorkulous yeMac
Kana iwe uchida kuve nemazano ako akarongeka, ane hukama uye ari pane yako Mac, Corkulous inogona kunge iri iyo application yawanga uchitsvaga.
Manage yako karenda kubva kumenu bar nepopCalendar
Kugadzirisa yedu Mac kalendari kubva kumusoro menyu bhawa iri yakapusa maitiro maitiro nekuda kwepopCalendar application
Oceanhorn 2 Goridhe Edition Zvino Inowanikwa paApple Arcade
Iye zvino inowanikwa kurodha pasi uye Gameplay Oceanhorn 2, yegoridhe edition ine mishini mitsva, mitsva yekuguma uye zvirinani mifananidzo muApple Arcade
Chinja maDVD ako kuita MP4 mumaminetsi mashanu chete neMacX DVD Ripper Pro (yemahara)
Iwe unoda kushandura DVD kuita MP4 paMac? Tsvaga maitiro ekuzviita zvirinyore uye nekukurumidza chaizvo nechishandiso ichi kugadzira mabuckups emaDVD ako.
Manage ako maPDF pasina zvinetswa nePDF maneja
PDF maneja anotibvumidza isu kuwedzera uye / kana kudzima mapeji kubva paPaul faira, kuichengetedza ne password, kumanikidza, kuwedzera mifananidzo ...
Isina kupindurwa 2 yeMac uye usambofa wakasiya iMessage isina kupindurwa
Usarase chero iMessage kubva kuMac yako neichi chishandiso icho chinotivhenekera zviri nyore kuti tisaverenge kana kusapindurwa mameseji
Iyo nyowani nyowani yezvinhu 3, 3.12.4, inounza inonakidza nhau kune edu maMac, asi kunyanya kune Apple Watch.
Manage uye uvanze kunyorera kubva kumenu bar neBartender 3
Kutenda kune Bartender 3 application isu tinokwanisa kubata nguva dzese izvo zvinoshandiswa zvinoratidzwa mune yepamusoro menyu bar kuwedzera kune mamwe mabasa
Tsvaga iyo nyika yemhuka dzesango ne 3D Earth
Neye 3D Earth application, ivo vadiki vari mumba vanogona kusvika pakuziva dzakasiyana siyana mhuka nemaruva kubva kutenderera pasirese.
Maitiro ekuvhura iyo Safari webhu peji mune imwe browser
Kana iwe uchigara uchishandisa Safari asi usingakwanise kuwana zvakakwana iwo mapeji ewebhu iwe aunoona, isu tinokuratidza maitiro ekugadzirisa dambudziko iri.
Yakazara Hondo: WARHAMMER II - Warden & Iyo Paunch DLC ikozvino yave kuwanikwa pane macOS
Iyo DLC nyowani yave kuwanikwa yemukurumbira mutambo Yakazara Hondo: WARHAMMER II. Mune ino kesi, Iyo Shadow & Iyo Paunch DLC
Gadzira mabhodhi ekukurumidza uye nyore neBarcode Mugadziri
Nekuda kwekushandisa kweBarcode Mugadziri, tinogona kugadzira mabakhodhi nekukurumidza uye nyore, inoenderana neese mafomati pamusika.
Zoom inoronga kuve yakachengeteka kwazvo mune yayo yakabhadharwa vhezheni
Zoom inoronga kuve yakachengeteka kwazvo mune yayo yakabhadharwa vhezheni. Iye akawana kutanga kwakasarudzika mukunyora meseji uye mafaera kuti aise kuZoom.
Iwe unogona ikozvino kushandisa yako Canon EOS sewebhu webcam pane yako Mac
Iwe unogona ikozvino kushandisa yako Canon EOS sewebhu webcam pane yako Mac.Iwe unogona ikozvino kutsiva yako Mac's FaceTime kamera neCanon EOS yako kana Powershot yemusangano wevhidhiyo.
Tsvina Bike Motocross Stunts, kune asingasviki matatu euros pane Steam
Tenga iyo Tsvina Bike Motocross Stunts mutambo weMac uye uve nenguva yakanaka yekuita kusvetuka uye stunts nemudhudhudhu wako.
HEIC Converter -Aiseesoft yeMac yemahara izvozvi
HEIC inokutendera iwe kuti ubve kubva pane iyi fomati kuenda kuJPG kana PNG nenzira yakapusa kubva kuMac uyezve zvekare yemahara muApp Store.
Logitech inosvitsa yayo nyowani G915 Tenkeyless michina keyboard
Iyo itsva Logitech G915 TKL yemagetsi keyboard ichangobva kuunzwa uye inopa vashoma vane ruzivo vashandisi kuwanda kwakawanda pamusoro peiyo yapfuura vhezheni
Ronga yako mameseji evhidhiyo paMac neChiitikoEntry: Google Sangana & Zoom
ChiitikoEntry chishandiso chinotibvumidza isu kuronga zvirongwa zvekujoinha neyakareruka, kutora videoconferensi kuburikidza neGoogle Sangana kana Zoom
Ziva iyo nguva yenyika chero ipi kubva kumenu bar ine FlagTimes
Kutenda kune iyo FlagTimes kunyorera, isu tinogona kukurumidza kuziva nguva dzenzvimbo dzenyika chero ipi kubva kumusoro menyu bar.
Ziva nguva dzese tembiricha yako Mac macomputer neTembiricha Gauge
Kuziva tembiricha yezvinhu zveMac yedu kunogona kutibvumidza kuti tirege kuti zvimwe zvezvinhu zvacho zvinokuvara zvisinga gadzirisike.
Nyatsoshandisa nguva yako pamberi peMac ine TimeTrack
Zvino kuti isu tinoshandisa yakawanda nguva pamberi pedu maMac, iwe ungangoda maneja wenguva kuti uzive kuti unoigovera sei. TimeTrack ichakubatsira iwe.
Kurumidza kugadzira mifananidzo yemifananidzo neTurboMosaic
Kana iwe uchida kugadzira mosaics neako aunofarira mafoto, nekuda kweiyo TurboMosiac kunyorera macOS unogona kuzviita nekukurumidza uye nyore.
Towers ye Everland ikozvino inowanika kuMac mukati meApple Arcade
Chinyorwa chitsva chinobatana neApple Arcade. Hapana chimwezve uye hapana chakaderera pane mutambo unounza pamwechete mu ...
Mumvuri weTomb Raider - Yakatsanangurwa Edhisheni, inowanikwa paFeral
Mutambo Shadow weTomb Raider - Definitive Edition rave kuwanikwa kune macOS neLinux vashandisi, mira zvekare uye unakirwe
Kana iwe wakaneta neyakagadziriswa mapikicha, iwe unofanirwa kuyedza Nhoroondo
Iyo Blackgrounds application inotibvumidza kunyatsogadzirisa iwo mufananidzo (kana vhidhiyo) iyo inoratidzwa pane komputa yedu desktop.
Chikoro Chekushandisa App Kugadziridza paMac
Apple inogadzirira yekutanga online kudzoka kuchikoro nekuvandudza imwe yayo quintessential zvikumbiro zvechikoro paMac: Chikoro cheChikoro
Wedzera nhamba yemakona anoshanda paMacOS neAmbi Launcher
Ambi Launcher inokanganisa nemamwe akawanda sarudzo kumakona anoshanda ayo macOS inotipa isu natively.
Nakidzwa neshark munzvimbo yavo yepanyama pane yako Mac desktop
Neye Shark 3D application, inowanikwa paMac App Store, tinogona kuzadza desktop yedu uye screensavers nema shark.
Gadzira mapikicha macolla emhando ipi neipi neiyo FigrCollage 2
Kugadzira manhamba nemifananidzo yedu iri nyore uye inokatyamadza maitiro atinogona kuita nekuda kweiyo FigrCollage 2 application
Tsvina 4 yakaderedzwa yeMac kuFeral Inopindirana
Iyo yakasviba 4 mutambo inogona kuwanikwa pane iyo Feral Inopindirana webhusaiti pamutengo wakaderera wema21 euros
MacTracker yakagadziridzwa kuita vhezheni 7.9.2
Imwezve vhezheni yeMactracker application yeMac inowanikwa.Iyi yekuvandudza inowedzera zvimwe zvigadziriso uye vintage Apple mhando
Ubisoft inokwidza Apple kumutambo "Nzvimbo F2"
Ubisoft yakamhan'arira Apple kutyora mutemo uye ichibvumira iyo Area F2 mutambo kuti utorwe kubva muchitoro chayo.
Chinjana data pakati peMac yako ne iPhone nekukurumidza uye nyore neMobiMover Pro
Kuchinjisa dhata kubva ku iPhone, iPad kana iPod touch kune Mac, kana zvinopesana, iri nyore uye nekukurumidza maitiro nekuda kweMobiMober application
Bug muEdison Mail "inodarika" maakaunzi eemail pakati pevashandisi
Bhugi muEdison Mail "inodarika" maakaundi emaadhi pakati pevashandisi. Chikanganiso chakakomba muEdison Mail inopa mukana wekuwana maakaunzi evamwe vashandisi.
Instantli ndeimwe eaya mapurogiramu asinganyatso kuzivikanwa asi kana iwe uine mufaro wekuedza iwo, ndeaya eawo aunogara kune yako Mac
Strongbox Password Yakachengeteka yeMac inokubatsira kuchengetedza mapassword ako akachengeteka
Strongbox Password Safe ndeimwe yeaya mafomu ekuchengetedza mapassword ako munzvimbo yakachengeteka uye haufanire kuarangarira
Mutambo wezano Aegis Vanodzivirira, yemahara kwenguva pfupi
Iyo Aegis Defenders mutambo mune yayo Mac vhezheni inowanikwa kurodha mahara kuburikidza neanozvininipisa Bundle.
Apple Inoburitsa Safari Technology Preview 106
Apple yakaburitsa iri vhezheni 106 yeSafari Technology Preview. Iyo internship browser iyo Apple yakagadzira makore mana apfuura
Gadziridza Adobe Acrobat Reader kudzivirira zvikanganiso zvekuchengetedza. Kana iwe uine iyo yakaiswa, iwe unoratidzwa kune mumwe munhu ane mukana kune yako Mac.
Kutenda kune iyo Deluxe Luna HD kunyorera, isu tinogona kuziva matunhu emwedzi kana isu tichifarira gadheni uye nyeredzi.
Unreal 5 ichave iripo kune macOS muna 2021
Epic Mitambo yakazivisa kuti iyo nyowani Unreal 5 vhidhiyo mutambo injini ichave iripo gore rinouya ichivimbisa hunoshamisa hunhu
Iyo SteelSeries Nimbus + kutonga iko zvino kuri pamutemo
Runyerekupe rwakazadzikiswa uye SteelSeries ikozvino yave neNimbus + nyowani iriko Ichi chidzoreso nezvimwe zvinonakidza kuvandudzwa
Iwo akanakisa graphic adventures eMac
Graphic adventures yakanga iine nguva yegoridhe muma90, mune imwe mhando yakasiiwa kusvika nhasi asi kwatinotowana mazita makuru
Apple yakaburitsa nyowani nyowani kuLogic Pro mimhanzi yekugadzirisa chirongwa.Mabasa matsva uye mamwe atove veteran akagadziridzwa zvachose.
Maitiro ekuwedzera bhukumaki kune kero dhairekitori muSafari
Kana isu tisingade mabhukumaki edu eSafari ave eWest West, isu tinofanirwa kuchengeta mabhukumaki matsva mumaforodha avo anowirirana
Na Meeter ronga yako vhidhiyo misangano pane yako Mac
Na Meeter, ronga yako videoconferences paMac yako.Tora yako karenda data uye uvhure videoconferensi nechishandiso chaunoshandisa kazhinji
Chengetedza Mac yako kubva pakurara neNoSleep, yemahara kwenguva yakati rebei
NoSleep ndechimwe chekushandisa chinodzivirira Mac yedu kuti irege kurara kwenguva yakambosimbiswa nesu
Chinja maPodcast ako kuita mavhidhiyo pane yako Mac neFusionCast
Kana iwe wakambofunga kuti ako maPodcast anotaridzika zvirinani pane vhidhiyo, usarasikirwa neichi chitsva chishandiso chinonzi FusionCast
Iyo yakakurumbira Edison application ikozvino inowanika kuMac
Iyo inozivikanwa application yekugadzirisa email paIOS, Edison Mail, yave kuwanikwa kurodha pasi kubva kuMac App Store.
Mactracker inogamuchira imwe yekuvandudza mumazuva mashoma
Iyo Mactracker application inogamuchira iyo nyowani vhezheni mazuva mashoma mushure mekuvandudza kwayo kukuru. Mune ino kesi vanogadzirisa madhiragi uye vanowedzera iyo YeMagetsi Khibhodi
Tarisa pfungwa dzako neDeskCover, yemahara kwenguva shoma
Kutenda kuDeskCover application, tinogona kutarisa kugadzirwa kwedu pane zvinoshandiswa kwete kwete kumashure kwedesktop yedu
Kana iwe uri mushandisi wenguva dzose weApple podcast uye iwe wajairawo kushandisa mapfupi ekhibhodi, unogona kufarira kuziva iwo atinokuratidza mune ino chinyorwa
Kutenda kune switchchResX application, isu tinogona nyore uye nekukurumidza kushandura resolution yedesktop uye kumhanya kunyorera kwakabatana nekushandisa kwayo.
Kuti uwane kodhi ye Safari peji rewebhu, isu tinofanirwa kutanga tamisa menyu yekuvandudza
Mactracker Inowana Gadziriso neNew MacBook Models uye Zvimwe
Iyo itsva vhezheni yeMactracker application inowedzera ese matsva Hardware uye software yakaunzwa neApple mumwedzi ichangopfuura.
Chinja resolution yeMac yako nekukurumidza neiyi yemahara kunyorera kwenguva shoma
Kushandisa zvisarudzo zvisingawirirane neMac yedu inzira iri nyore kwazvo nekutenda kuScreen Manager application
CleanMyMac X inouya kuMac App Store uye kupemberera isu takabvarura marezinesi mashanu
Mangani mafomu anogona kuzvirumbidza nekutendeuka makore gumi nemaviri? Zvakanaka, CleanMyMac X ndomumwe wavo, chiratidzo chisina kujeka chekuti zvinoita ...
Yakazara Hondo: Shogun 2 yemahara kwenguva pfupi
Steam inotipa kwenguva yakati rebei iyo Hondo Yakazara Shogun 2 zita, zita rine mutengo wenguva dzose we29,99 euros.
Yakanakisa Microsoft Excel keyboard mapfupi e macOS
Kana iwe uchida kugona zvidzitiro zve keyboard mu Microsoft Excel, mune ino chinyorwa tichakuratidza pfupiso yezvakanakisa uye zvinonyanya kubatsira.
Teregiramu kuvhura yakachengeteka boka vhidhiyo mafoni gore rino
Teregiramu ichavhura yakachengeteka yeboka vhidhiyo mafoni gore rino. Akazvisimbisa pane rake blog, achivimbisa kuti vanogona kuve muboka uye vakanyorwa.
Teregiramu yeMac yakagadziridzwa kuita vhezheni 6.1.1
Teregiramu inowedzera vhezheni nyowani yeMac app, mune ino kesi takasvika vhezheni 6.1.1 mune iyo mamirioni mazana evashandisi vanopemberera.
Apple Inoburitsa Safari Technology Preview 105 Kugadzirisa Bugs uye Kuvandudza Performance
Apple inotangisa Safari Technology Preview 105 kugadzirisa bugs uye kugadzirisa mashandiro. Iyo itsva vhezheni yeiyi kuyedzwa Safari inowanikwa kune wese munhu.
PDF Uyezve, yemahara kwenguva shoma
Vazhinji ndivo vanhu vakave nemukana wekuenderera mberi vachishanda kubva kumba kubva zvakatanga ...
Maitiro ekushandura mavhidhiyo kune mamwe mafomati neVLC
MuMac App Store isu tine yedu yakawanda nhamba yekushandisa iyo inotibvumidza isu vaviri kutamba mavhidhiyo ...
Opera yeMac inosanganisira kuwana kune Instagram mune yayo nyowani vhezheni
Opera yeMac inosanganisira kuwana kune Instagram mune yayo nyowani vhezheni. Chiratidzo mubato repadivi chinokupa mukana wekudya kwako, nyaya, uye yakananga mameseji.
Unogona kutenga NativeConnect yeMac zvachose
Iyo yekuvandudza-yakanangana neNativeConnect app ikozvino inogona kurodha pasi kubva kuMac App Store mune imwechete, yeupenyu kutenga.
Path Finder, inonakidza imwe nzira kune iyo Tsvaga paMac
Kana iyo macOS Finder isingakugutsikane, iwe ungangodaro unofarira kuziva iyo Path Finder application, iyo faira yekutsvagisa ine inoshamisa kuita kwakawanda
Twitter yeMac inogadziridzwa kuitira kuti nguva yedu yekutambira igamuchire ma tweets munguva chaiyo
Twitter inovandudzwa kuti ipe vashandisi vayo basa rekuzvigadziridza iwo wega mutsara wenguva nezvinyorwa zvitsva
Iyo Atom Run mutambo, yemahara kwenguva shoma
Atom Run, mutambo wepuratifomu unowanikwa paMac App Store, inowanikwa kuti utore mahara zvachose kwenguva yakati rebei.
Beyond Blue uye A Peta Kuparadzaniswa, miviri mitsva mitambo yeApple Arcade
Mitambo miviri mitsva yatovepo muApple Arcade: Beyond Blue uye A Fold Apart, vanosvika vakasimba kunakidza vashandisi vavo
Mavhiri eAurelia, yemahara paEpic Mitambo Chitoro kwenguva yakati rebei
Mutambo wakasununguka unoitwa neEpic Games Chitoro kwatiri ma Wheel eAurelia, zita rinorondedzera nguva munhoroondo yeItaly.
Gadzira yako wega mimhanzi neGarage Band pane yako Mac
Unogona kugadzira mimhanzi yako wega neGarage Band nemidziyo yauinayo kutenderedza imba yako. Iwe unongo fanirwa kuti uzvibvumire iwe pachako kurairwa neNhasi kuApple mavhidhiyo
Batman Arkham GOTI GOTY pahafu yemutengo wemacOS
Kutengesa kutsva kweBatman Arkham GOTI mutambo mune yepamutemo Feral Inopindirana chitoro. Tora mukana wekutora mutengo weuyu veteran mutambo
Nzira yekuvhura nekushandura .djvu mafaera pane macOS
Kana iwe uchida kuvhura uye / kana kushandura mafaira mune djvu fomati, mune ino chinyorwa tinokuratidza iwe akanakisa mafomu ekuti udaro.
Tikiti Kuti Ukwire: Rwendo rwekutanga, yemahara chitima mutambo wemhuri yese
Tikiti Kuti Uchengete: Rwendo Rwakasimba ndeye zita revadiki vatinogona kurodha mahara kwenguva yakati rebei.
Yekhibhodi mapfupi eChannel uye Edge mabhurawuza paMac
Yekhibhodi mapfupi e Chrome neEdge mabhurawuza paMac.Rondedzero inoshanda kune ese mabhurawuza sezvo iwo akavakirwa pane imwecheteyo Chromium chikuva.
Famba yako masevhisi ekuchengetedza gore zvakananga kubva kune Tsvaga
Kutenda kune iyo ExpandDrive application, isu tinogona kuwedzera ese ekuchengetedza sevhisi maakaundi ayo atinoshandisa kazhinji kune iyo Tsvaga.
GoodNotes app inova yepasirese
Iko kunyorera kweGoodNote manyorerwo chimwe chishandiso chakatora kutengwa kwepasirese mune ese Apple ecosystems
Bhawa Hapana chinhu chemahara chinodzivirira kubata kwekukanganisa kweTouch Bar. Unogona kuita kuti ishande chete kana iwe ukadzvanya iyo fn kiyi.
Kana isu paine mamwe maonitita pane yedu Mac, ControlMonitor inokutendera iwe kugadzirisa kupenya uye odhiyo yeavo ma skrini kubva pabhobhoyo.
Kuziva zvishandiso zvakabatana neWi-Fi network iri nyore kuita neIP Scanner application
Pfungwa huru: Muverengi wePDF kune vaongorori vane kutenga kwese
Pfungwa huru: Muverengi wePDF kune vaongorori vane kutenga kwese. Inotarisana nevadzidzi uye vaongorori vari kutsvaga kutora zvinyorwa paPDF.
Mapfupiso ekhibhodi yekodhi yeMepu paMac
Yekhibhodi mapfupi eMepu paMac. Kunyanya kana iwe ukashandisa Mamepu pane yako MacBook isina mbeva, mapfupi ekhibhodi achashanda zvakanyanya kwauri.
Maitiro ekuvhura .webp mafaera pane Mac
Kana iwe uine chidimbu chekuvhura mafaera muwebhu webhu pane yako Mac, mune ino chinyorwa tichakuratidza iwe chishandiso chaunoda.
Zvekuvanzika maturusi ekushanda kubva kumba
Telework haina kuenderana neyakavanzika. Muchokwadi tinofanirwa kumuchengetedza akachengeteka kupfuura nakare kose kuti tinopedza maawa mazhinji tiri pamba
Universal Audio's LUNA yekurekodha software inowanika kuMac chete.Mahara kune vashandisi veMuchadenga Audio zvishandiso neThunderbolt.
Kudzoreredza mafaera nekukurumidza uye zvakanyanya, iyo yemuno sarudzo iyo macOS inotipa, inosiya zvakanyanya kudikanwa maererano neanoshanda.
Dzimwe nyika dzinorambidza vakuru vadzo kushandisa Zoom. Germany neTaiwan izvozvi zvinorambidza kushandiswa kweZoom mumisangano yevhidhiyo yehurumende.
Simulators eMac uye iPad vanachiremba vechitima vari kurwisa COVID-19
Simulators eMac uye iPad vanachiremba vechitima vari kurwisa COVID-19. Ivo vanobatsira kujairana neanofema vasati vaashandisa pane vanhu vanorwara.
Kana komputa yedu yatanga kuratidza kusashanda zvakanaka, yakaturika kana kusapindura, chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuziva dambudziko nechikumbiro chekutarisa komputa
Ani'Mots mutambo wepamuchinjikwa wevadiki
Ani'Mots mutambo wepamuchinjikwa wekuti vadiki vafare vachiri kudzidza vasingazvizive.
Mutambo weStardew Valley unowanikwa kune vashandisi veMac
Mutambo weStardew Valley ndiwo mutambo unozotiendesa kuminda yatakapihwa kubva kuna sekuru vedu kunorima munda nekuita sevarimi
Iyo Soulver yeMac application yakagadziridzwa.
Iyo Soulver kunyorera kweMac ichangobva kuvandudzwa uye inova inokurumidza, inoshanda kushanda nezvakawanda zvine muto maficha
Kune avo vese vanofarira nhabvu uye vanofunga kuti vanogona kuve neyabo timu, Nhabvu Manager 2020 ndiwo mutambo wako weMac
Maitiro ekurodha pasi Chromium-yakavakirwa Microsoft Edge yemacOS
Kana iwe uchida kuyedza iyo nyowani yeMicrosoft Edge Chromium pane yako Mac, chimwe chinhu chandinokurudzira ini pachangu, ini ndinokuratidza maitiro aungaitora.
Yakaona kunetsekana kwakanyanya muFirefox
Kunetseka kwakakomba kwaonekwa muFirefox, saka zviri kutotora nguva kugadzirisa yako vhezheni yebrowser iyi
Maitiro ekuwedzera kumashure mufananidzo muGoogle Chrome
Kuwedzera mufananidzo wepashure kuGoogle Chrome ndechimwe chezvishoma zvikonzero nei browser iyi ichikosha paMacOS.
Telegraph Lite inogadziriswazve kuti igamuchire maforodha
Teregiramu Lite yakagadziridzwawo kugadzira nzira yemafolda, iyo huru yekufungidzira yazvino kugadzirisa yeiyi mameseji sevhisi
Mutambo Wakaenda Kumba, unowanikwa paEpic Mitambo Stre yemahara kwenguva pfupi
Musoro weMac watinopihwa neEpic Games Chitoro vhiki ino ndewe Kuenda Kumba, imwe giraidhi yakajeka apo hatifanirwe kugadzirisa mapuzzle.
Zoom inogadziridzwa yeMac uye inobvisa iyo 'Preflight'
Matambudziko ari kuramba achikura kuZoom kunyangwe ari kuzvigadzirisa zvishoma nezvishoma. Izvi zvine chekuita nedambudziko rekuisa iyo app paMac
Zoom iri kutevera nzira imwecheteyo seFacebook
Iyo chete imwe nzira yeku Zoom yekuita yemhando vhidhiyo mafoni uye nevazhinji vatori vechikamu ndeye Skype, hapana imwe.
Facebook Messenger inotangisa kunyorera macOS nemavhidhiyo mafoni
Facebook ichangobva kuburitsa iyo mameseji app ye macOS, ichitibvumidza kuita risingagumi vhidhiyo mafoni.
Iyo nyowani vhezheni yeTeregiramu yeMacOS inowedzera iyo sarudzo yekuwedzera maforodha kuronga chats uye zvimwe zvakawanda zvitsva maficha
Google inotiyeuchidza kuburikidza neChrome kubva kumagumo kwa2020, tinogona kukanganwa nezve kugona kuvhura mapeji ewebhu akagadzirwa muFlash
Streamlabs OBS yave kuwanikwa mubeta ye macOS
Iyo yakakurumbira Streamlabs OBS application mune yayo Mac vhezheni yave kuwanikwa, kunyangwe ikozvino iri mubeta.
Apple yakagadzirisa iyo iWork suite iyo ine Mapeji, Numeri uye Keynote kune vhezheni 10.0 ine nhau kunyanya zvine chekuita neICloud
Zvinotaridza kuti Zoom haisi kuvimbisa kuchengetedzeka kwevatengi vayo neyekupedzisira-kusvika-kumagumo kunyorera uye izvi zvinogona kutungamira kunetseka kwehukama
Kutenga kwepasirese kuri kutanga kuonekwa: «Adaptivity» ndechimwe chazvo
Zvese zvinotengwa zvinotanga kuonekwa: "Adaptivity" ndechimwe chazvo. Nekutenga kumwe chete une iyo iOS vhezheni uye macOS.
Wedzera inokurumidza kuwana menyu nezviito zvaunoshandisa zvakanyanya paMac yako neOne switch
Kutenda kune Imwe switchch application, isu tinokwanisa kumisa nekumisikidza mamwe macOS marongedzero nekamwe chete tisingafambe nemamenyu echikwata chedu.
Pixelmator Pro inovandudzwa pamwe nekuvandudzwa kukuru
Isu tatova neshanduro nyowani yePixelmator Pro yekugadzirisa application inowanikwa, mune ino kesi vhezheni 1.6 ine maficha matsva mukusarudzwa kwemavara uye nezvimwe
Kunyanyisa! 2, mutambo unonakidza wekushandira pamwe kuti unakidzwe neadiki
Kana iwe uchitsvaga mutambo unonakidza kuti upedze nguva nevana vako mukati memazuva ano akareruka, Akadhakwa! 2 ndiyo yakanakisa sarudzo yekufunga.
Mune yazvino beta yeDropbox ivo vawedzera nyowani yekuyananisa mashandiro anoita kuti ichi chishandiso chigovane zviitwa zvakafanana neICloud
Apple inowedzera kuyedzwa kwemahara kweayo "Pro" kunyorera kumazuva makumi mapfumbamwe nekuda kwekuvharirwa
Apple inowedzera kuyedzwa kwemahara kweayo "Pro" kunyorera kumazuva makumi mapfumbamwe nekuda kwekukiya. Iwo Logic Pro X odhiyo uye Yekupedzisira Kucheka Pro X vhidhiyo.
Isa Apple TV mifananidzo pane yako Mac
Kana iwe uchida kuti Apple TV wallpapers ioneke pane yako Mac, unogona kuzviita kuburikidza neyemahara kunyorera. Aerial isarudzo yako.
Affinity yeMac yakafunga kudzikisa mutengo wechirongwa chayo ne50%. Mbeu yako yejecha kudzikisira mhedzisiro yeCOVID-19
Kwete chete Epic Mitambo Chitoro, Steam uye Mac App Chitoro vanogona vashandisi ve ...
Kana iwe uine Movistar + unogona kuzviona pane Mac yako neVLC
Kana iwe uine Movistar + unogona kuzviona pane Mac yako neVLC. Mukushaikwa kweapp. yemuno kuMovistar, unogona kushandisa VLC kuti uone chikuva chayo, kana iwe uri munhu anonyorera, hongu.
Tomb Raider, yemahara kwenguva yakatarwa pane Steam
Kusvikira inotevera Kurume 24, isu tinokwanisa kurodha pasi Tomb Raider mutambo wemahara kuburikidza neSteam
Affinity suite yemahara kwemazuva makumi mapfumbamwe
Affinity suite yemahara kwemazuva makumi mapfumbamwe. Unogona kuyedza suite rese kwemazuva anotevera makumi mapfumbamwe, uye kana ikakunyengerera, ikozvino uine 90% dhisikaundi.
Akanakisa basa maapplication kutsiva Wunderlist
Musi waMay 6, Wunderlist icharega kushanda, asi risati rasvika zuva irori, tinofanira kunge takapa mabasa edu kune chimwe chikumbiro. Kana iwe uchitsvaga dzimwe nzira, isu tinokuratidza iwe sarudzo dzakanakisa
Iyo Yekushanda tebhu yeMac App Chitoro inova inonyanya kukosha izvozvi
Iyo yebasa tebhu yatinayo muMac App Store inogona kubatsira kune avo vanofanirwa kufonera mazuva ano
FaceTime kana Skype yeboka rako vhidhiyo mafoni kubva kumba
Tine mikana yakawanda yekuona shamwari uye mhuri kuburikidza nevhidhiyo kufona. Nhasi tinoratidzira FaceTime uye Skype
Epic Mitambo inotipa mitambo mitatu yemahara yeMac
Epic mitambo chitoro, inotipa 3 mitambo yemahara inoenderana neMac kusvika Kurume 19.
Maitiro ekurodha pasi mavhidhiyo eYouTube pane yako Mac
Maitiro ekurodha pasi mavhidhiyo eYouTube pane Mac yako.Nemahara ViDL app iwe yaunokwanisa. Iyo yekuchengetedza mhando inopfuura inogamuchirwa.
Raskin anochinja mashandiro aunoita paMac. Chipo.
Raskin chishandiso chinoshandura nzira yaunoshanda nayo paMac. Iye zvino Pro vhezheni yacho iri kutengeswa. Mukana wakanaka.
Zvikuru maapplication ekushanda kubva kumba neMac
Nedambudziko rehutano rinogadzirwa necoronavirus, zviremera zvinokurudzira kushanda kubva kumba. Aya maitiro mashoma eMac yako
Bvisa ruzivo rwuri mumagwaro ako neBlack Out, yemahara kwenguva pfupi
Kuwedzera mutsetse mutema muzvikamu zvemagwaro izvo iwe zvausingade kuratidza maitiro akapusa neBlack Out, yemahara kunyorera kwenguva shoma.
Gadzira chero mhando yekuumbwa nePhoto Collage Muiti
Photo Collage Mugadziri inotipa iyo hombe nhamba yezvishandiso yekugadzira yakanakisa nziyo nemafoto edu aunofarira.
Gadzira ako maikoni neIcon Plus, inowanikwa chete 1 euros kwenguva yakati rebei
Kugadzira edu emifananidzo, kungave kwemaapplication atakaisa kana eApplication, iri nyore maitiro neIcon Plus.
Kupfuura mazana mashanu ematemplate emarudzi ese e500 euros chete
Kana iwe uchitsvaga template template yeWork inosangana neyako yakajairwa kana nguva nenguva zvaunoda, iwe unofanirwa kutarisa ichi chishandiso
Namatira kweMac ichiri kwese uye ikozvino kunyorera
Imwe yeakanakisa maficha ekugadzirisa edu clipboard paMac ndeye Namatira. Iye zvino izvi zvaendeswa kune yemhando yekunyorera.
JustStream Pro inokutendera kuti ufambe kubva kuMac yako kuenda kune chero chishandiso, ingave iri smart TV, Apple TV, kana Roku chishandiso
Google Stadia ikozvino inogona kuyerera mitambo kune Mac yako mu4K
Google Stadia ikozvino inogona kuyerera mitambo kune Mac yako mu4K. Kana iwe uine yakanaka internet yekubatanidza, iwe unogona kutamba paGoogle Stadia mu4K.
Facebook Messenger yeMac inotanga kubuda muEurope
Facebook Messenger yeMac inotanga kubuda muEurope. Iri kutoshanda muFrance, uye munguva pfupi iri kutevera ichave yepasi rose.
Ruzha Meter Pro yeMac, ikozvino mahara
Iwe unowanikwa muMac App Store Noise Meter Pro yemahara, Shandisa Mac yako sekunge yaive Apple Watch uye pima ruzha munharaunda yako.
Chinja mafaera eMKV kuita MP4 neMKV2IOS
Kuchinja mafaera muMKV fomati kuva MP4 iri nyore kwazvo uye nekukurumidza kuita chirongwa nekuda kweMKV2IOS application.
Majong Classic 2 Pro, yemahara kwenguva shoma
Chinese Solitaire Majog inowanikwa mahara kwenguva yakati wandei paMac App Store
Kudonha kweFPS muFortnite imhosva yeEpic Games uye ichagadzirisa
Kudonha kweFPS muFortnite imhosva yeEpic Games uye ivo vari kuzogadzirisa. Izvo zviri kugadzirwa muchitsauko 2 chemwaka wechipiri, uye zvichagadziriswa.
Gadzira rako rako bhuku kubva kuMac yako neBhukuWright
BookWright inokutendera kuti ugadzire rako bhuku kubva kuMac yako, riise uye riise pakutengesa. Zvese kubva pakombuta yako uye nenzira yakapusa
Mutambo weInnerSpace, yemahara kwenguva yakati wandei paEpic Games Chitoro
Mutambo wemahara uyo Epic Games Chitoro usingaunze kwatiri vhiki ino ndeye InnerSpace
Affinity Publisher yeMac inovandudzwa neMicrosoftL kupinza, prelight, matemplate, uye zvimwe.
Affinity Publisher yeMac inovandudzwa neMicrosoftL kupinza, prelight, matemplate, uye zvimwe. Iyo yese Affinity suite yakagamuchira nyowani 1.8 yekuvandudza nhasi nezvimwe zvakakosha zviwedzero.
Teregiramu Lite yemacOS inogadziriswazve uye inowedzera mabasa matsva
Iyo vhezheni yeTeregiramu yebasa uye vatariri veboka vanogamuchira iyo nyowani nyowani iyo inowedzera rutsigiro kune inoyerera hwindo vhidhiyo.
Chinja mafaera muVSD / VSDX fomati kune chero imwe fomati
Kuvhura, kushandura kana kudhinda mafaera muVSD uye VSDX fomati iri yakapusa maitiro nekuda kweVSD Viewer & VSD Converter application
Teregiramu inovandudzwa kuti ishandise 5.9.2
Iyo itsva vhezheni yeTeregiramu yave kuwanikwa mairi zvimwe zvikanganiso zvakaonekwa pane yapfuura vhezheni zvinogadziriswa.
Safari icharamba zvitupa zveHTTPS zvine mwedzi inopfuura gumi nematatu yekushanda
Manage yako Instagram account kubva kuMac yako neGrid
Grid ye Instagram, inotibvumidza kudzora yedu Instagram account zvakananga kubva kuMac kwedu tisingashandise iyo vhezheni vhezheni.
Dudzira chero peji rewebhu raunoshanyira neDudziro yeSafari
Kana iwe uchitsvaga kuwedzerwa kweSafari iyo inokutendera iwe kuti uturikire iwo mavara mune mimwe mitauro emawebhusaiti iwe aunoshanyira, Dudziro yeSafari ingango sangana nezvaunoda.
Appstat, nyowani macOS app yeApple vagadziri
Appstat, nyowani macOS app yeApple vagadziri. Iyo inokuzivisa iwe yeApp Store Chengetedza data mune macOS menyu bar.
Geforce Zvino inounza Cyberpunk 2077 kuMacs pazuva rekuburitsa
Geforce Zvino ichaunza Cyberpunk 2077 kuMacs pazuva rekuburitswa kwayo. Musi waGunyana 17 ichaburitswa yezvinyaradzo, PC, uye GeForce Zvino.
Kutanga kutora matanho ako ekutanga mu graphic dhizaini neaya mafomu
Iwe unofarira graphic dhizaini? Usarasikirwa nesarudzo iyi yemapurogiramu ekugadzira uye marongero uchishandisa Mac. Ndeipi yaunosarudza?
Bvisa odhiyo kubva kumavhidhiyo ako neichi chemahara application
Kana iwe uchida kutora odhiyo kubva muvhidhiyo, tinogona kuzviita nekukurumidza uye nyore nekuda kweVideo2Audio application inowanikwa pane Mac App Store.
Safari Technology Preview 101 inogadzirisa kare mabugs.
Apple ichangobva kuburitsa vhezheni 101 yeSafari Technology Preview, kugadzirisa bugs uye kugadzirisa zvirinani vhezheni yapfuura.
Alto´s Odyssey pakupedzisira inowanikwa yeMac
Alto´s Odyssey pakupedzisira inowanika kuMac.Kana uchida kuzorora kwechinguva, uyu ndiwo mutambo wako. Iye zvino zvakare zve macOS.
Adobe Photoshop inopemberera makore makumi matatu nemaitiro matsva eMac uye iPad
Adobe Photoshop inopemberera makore makumi matatu nemaitiro matsva eMac uye iPad. Kana iwe uri Unyanzvi hweKunyoresa gore, ivo vanozoonekwa pane yako Mac uye iPad desktop.
Iyo yakakurumbira Streaks app yave kuwanikwa yeMac
Iyo yakakurumbira Streaks yekukurudzira app yave kuwanikwa kurodha pasi kwe macOS uye ichiri yakangofanana.
Gadziridza uine akati wandei maficha eAirMail 4
Iyo AirMail application inovandudzwa nenhau dzinoverengeka dzinonakidza dzevashandisi vane iyo Pro vhezheni yeiyi tsamba mutengi
Kusvikira anotevera Kukadzi 20, Epic Games Chitoro inotibvumidza kurodha mutambo weAzpez mahara, mutambo unosanganisa zano uye kurwa nemaoko.
Fortnite paMac: Zvinodikanwa zveSystem uye Matipi Ekuita
Fortnite paMac: Zvinodikanwa zveSystem uye Matipi Ekuita. Kamwe yaiswa iyo inosiyana marongero emukati emutambo kuti uwane kugona.
Tomb Raider pahafu yemutengo weMac
Chipo chinonakidza chinowoneka kumutambo Tomb Raider uyo unosiya mutengo wawo pahafu yezvakakosha chaizvo
Wedzera iyo karenda kune bar yemenyu uye wirirana nayo ne InstaCal
Kana iwe uchitsvaga chishandiso chinokutendera iwe kuti uwane uye nekugadzirisa yako karenda kubva kumenu bar, InstaCal ingangove iyo app iwe yauri kutsvaga.
Lockdown yatove chaiyo kune macOS. Zvinogara zvakanaka kuve neinenge imwe firewall uye ichi chishandiso chinoshanda nemazvo.
Spark inoburitsa nyowani nyowani ye macOS
Iko Spark kunyorera maneja ako kuchangobva kuvandudzwa kweMac, ichiwedzera mitsva uye inonakidza maficha
BlueMail inodzokera kuMac App Store sezvo kurwa neApple kunoenderera
Mushure memwedzi misere, iko BlueMail kunyorera kunodzokera kuma macOS, kunyangwe ivo vanogadzira vasingaise parutivi mhosva yavo vachipesana neApple.
Apple inotangisa Swift Nzvimbo dzekutamba dzeMac: dzidza kukodha nekutamba
Apple inotangisa Swift Nzvimbo dzekutamba dzeMac: dzidza kukodha nekutamba. Iyo yemahara app kubva kuApple kuti udzidze maitiro ekunyorera Swift.
Spike email inowedzera yakasviba modhi uye zvimwe mune yayo nyowani yekuvandudza macOS
Spike mail inogadzirisirwa macOS inounza smart smart modhi mairi iyo inokwanisa kungo shandura yega matsamba eHTML
Iyo MaCommander 2 faira maneja, yemahara kwenguva shoma
Kana iwe uchitsvaga maneja wefaira wakafanana neiyo inopihwa neWindows, asi paMacOS, MaCommander ndiyo yakanaka sarudzo yekufunga.
Edison Mail inotengesawo ruzivo nezve vashandisi vayo kune vechitatu mapato.
Edison Mail inotengesawo ruzivo nezve vashandisi vayo kune vechitatu mapato. Anoti ndiyo nzira yekuti kunyorera kwake kuve kwemahara pasina kushambadzira kunoshungurudza kune mushandisi, uye kuti ruzivo rwunotarisirwa harizivikanwe zvachose.
Ratidza yako aunofarira mifananidzo sekunge yaive mharidzo neichi chishandiso
Kana iwe uchida kudzivisa kuve nekugadzira mifanidzo yemifananidzo yako yaunofarira, unogona kushandisa iyi application iyo inotibvumidzawo kuti tiwedzere mimhanzi yekumashure uye kuseta nguva nemufananidzo
Calinsight, karenda yemenu bar
Kana iwe uchitsvaga Anwendung kubata karenda yako kubva kumenu bar, iwe ungangoda kutarisa kuCalinsight.
Mitambo yeWindows ikozvino paMac yako nekuda kweGeForce Zvino
Pukuta Mac yako yekare nekuti nekuda kweGeForce Iye zvino uchakwanisa kutamba mitambo yemavhidhiyo yemazuva ano inongogadzirirwa Windows.
Kunetsekana kwawanikwa muWhatsApp desktop application yeMac.Tarisa uye uvandudze kune yazvino vhezheni neakaundi inounza iwe.
SiteSucker inotibvumidza kurodha chero peji rewebhu nezvose zvirimo
Kana iwe uchida kudhawunirodha chero peji rewebhu pamwe nezvose zvirimo, mhinduro yakapihwa neSiteSucker ndeimwe yeakanakisa aripo parizvino paMac App Store.
Twitter ichangobva kuburitsa nyowani nyowani ye macOS umo iko kunyorera kunowirirana neTouch Bar.
Chinja chero fomati yekuteerera kune MP3 neichi chishandiso
Kana zvasvika pakushandura mafaera odhiyo kuMP3, isu tine yedu yakawanda nhamba yekushandisa ...
Mune maOptics, kufunga kwepfungwa uye fungidziro yekuona zvinotipinza pamuedzo
Kana iwe uchitsvaga mutambo wezvekunyepedzera fungidziro dzinoyedza pfungwa dzedu dzepfungwa, zvingangoita kuti Optica inogutsa zvaunoda.
Ruya hausi mumwe chete mutambo wepuzzle, sezvo inotikokawo kuti timbozorora nekufungisisa nekutenda kune yayo inonakidza ruzha.
XMenu chishandiso chiri nyore cheMac icho chinokutendera iwe kuti uwedzere akateedzana emamenu ekudimbudzira ayo achabatsira zvikuru
Robhoti Kurwisa 2 Minibots, yemahara kwenguva shoma
Tora iyo Robhoti Kurwisa 2 mutambo wakasununguka zvachose kune yakatarwa nguva yako Mac.Robhoti kurwa kunouya kune yako Mac
Nyowani Apple Arcade Ads paYouTube
Apple yakatumira akati wandei mavhidhiyo kutsigira iyo Apple Arcade sevhisi. Kunakidzwa kushambadza izere chaizvo neApple ruzivo
Malware inomhanya paMacs nekuda kweFlash Player
Malware inomhanya paMacs nekuda kweFlash Player. Flash Player yafa. Kana iwe uchiri kuisirwa pane yako Mac, kurumidza kuibvisa.
Fantastical 3.0: Yemahara uye neyekunyorera modhi
Inonakidza kalendari app inogamuchira imwe yeakanyanya kuvandudza munhoroondo yayo uye inoshandura yayo bhizinesi modhi kunyorera
Wedzera watermark kumifananidzo yako neWatermark Sense
Kuwedzera watermark kumifananidzo yedu hakuna kumbove kuri nyore pane iko Watermark Sense application
Butter Royale uye Hapana Nzira Imba inowanikwa paApple Arcade
Mitambo miviri mitsva yakawedzerwa kuApple Arcade. Butter Royale uye Hapana Nzira Imba inozvimba mazita eichi chikamu cheApple kuti ufare
Rocket League mutambo wekumira kutsigira macOS
Mugadziri weRocket Rock akazivisa kuti ichave ichibvisa mutambo uyu munaKurume, kubvisa kugona kutamba online.
Nyowani vhezheni yeTeregiramu yeMac iri mune iyi kesi iri 5.9. Shanduko uye nhau maererano neongororo zvakawedzerwa
Adobe's Cloud Cloud ikozvino inotsigira Apple ID kusaina
Adobe's Cloud Cloud inotsigira kare kusaina neApple ID yako. Asi zorora uine chokwadi chekuti Apple haizotamisa chero rako data kubva kuaccount yako.
Nakidzwa neiyo yese Hafu-Hupenyu saga yemahara kusvika Kurume
Valve inotibvumidza kunakidzwa neiyo Hafu-Hupenyu saga yemahara kusvika Kurume, mwedzi uyo Half-Hupenyu: Alyx ichaburitswa
Ndege Denga Rwendo mutambo wakasununguka kwenguva yakati rebei
Kana uchida mitambo yendege izvozvi kwenguva yakati rebei unogona kudhawunirodha mutambo weAirplane Sky Voyage yeMac yako.
VideoProc, imwe yeakanakisa 4K vhidhiyo edhita
Kana iwe uchitsvaga yakapusa mupepeti kushandura ako 4K mavhidhiyo kune mamwe mafomati, VideoProc ndicho chikumbiro chauri kutsvaga
IA Munyori 5.4.2 inowedzera matsva mashandiro paMac
Iyo nyowani vhezheni 5.4.2 yeI Munyori, mupepeti par kugona, inowedzera zvinonakidza zvitsva maficha mukutumira uye kuteedzera sarudzo mune macOS
Iyo Microsoft Edge Chromium browser yakagadzirira macOS
Anenge mwedzi mitatu mushure mekutanga kwe beta, Edge Chromium inowanikwa kurodha pasi paMacOS asi kwete pauzere hunyanzvi.
Mashandisiro ekushandisa Sticky Notes mu macOS Catalina
Isu tinokudzidzisa iwe yechinyakare macOS Anonamira Maturu chishandiso kuitira kuti iwe ugone kukurumidza uye kungonyora pasi zvinyorwa zvako pasina kudiwa kwechitatu-bato maapplication
Apple Reality Converter inoita kuti zvive nyore kugadzira 3D yakawedzera chokwadi zvinhu
Apple Reality Converter inoita kuti zvive nyore kupinza, kugadzirisa, uye kugadzira 3D zvinhu zvinowirirana neakawedzera chokwadi tekinoroji.
Yakasungwa, yemahara kwenguva yakatarwa paEpic Mitambo Chitoro
Yakasungwa, ndiwo mutsva mutambo watinogona kurodha mahara emacOS kuburikidza neEpic Games Chitoro
Gosthery Lite inowedzera nhevedzano yekuvandudza mune yayo nyowani vhezheni 1.1.0 iyo ichangoburitswa. Iyi webhu ad blocker inowedzera yeSafari